Iindaba -Izibonelelo ezi-7 ezinkulu ze-ganoderma edliwayo yexesha elide
Yintoni iReishi Mushroom?
Amakhowa eReishi aphakathi kwamakhowa aliqela asetyenzisiweyo asetyenziswe kangangamakhulu eminyaka, ngakumbi kumazwe aseAsia, kunyango losulelo. Kutshanje, ziye zasetyenziswa kunyango lwezifo zamaphaphu kunye nomhlaza. Amakhowa amayeza avunyiwe njengezihlanganisi kunyango olusemgangathweni lomhlaza eJapan nase China ngaphezulu kweminyaka engama-30 kwaye unembali ebanzi yeklinikhi yokusetyenziswa okukhuselekileyo njengearhente enye okanye idityaniswe nekhemotherapy.
ukhuselo, ukuthomalalisa umzimba, i-antioxidant, i-immunomodulatory, kunye ne-antineoplastic activities. Ii-spores ziqukethe izinto ezahlukeneyo ze-bioactive kubandakanya polysaccharides, triterpenoids, peptidoglycans, amino acid, fatty acids, iivithamini kunye neeminerali. Ekulawuleni ngomlomo i-Ganoderma lucidum spores powder capsule, izithako ezisebenzayo zinokulinganisa amajoni omzimba, zinokusebenzisa iiseli ze-dendritic, iiseli zokubulala zendalo, kunye nee-macrophage kwaye zinokuguqula imveliso yeectokines ezithile, Olu ncediso lunokuphucula ukudinwa okunxulumene nomhlaza kwaye isetyenziswe njengesixhobo sokulala; inokuba nefuthe elihle kwintliziyo, emiphungeni, kwisibindi, kwi-pancreas, kwizintso, nakwinkqubo ye-nervous system.
Izibonelelo ze-ganoderma enokutyiwa yexesha elide:
1. Ukuthomalalisa kunye nokuthomalalisa iintlungu kwinkqubo yovalo lwangaphakathi;
2. Nceda inkqubo yokuphefumla inciphise ukukhwehlela kunye nokususa inkohlela yokukhohlela;
3. Ingomeleza intliziyo, yonyuse ukujikeleza kwemithambo yegazi, inyibilike itrombus, uxinzelelo lwegazi olusezantsi, ukuthoba amanqatha egazi kunye nokunciphisa ukubunjwa kwecwecwe le-atherosclerotic kwinkqubo yentliziyo;
4. Khusela, uchithe ityhefu uze uhlaziye isibindi. Inokuphucula umsebenzi wee-enzymes ezahlukeneyo kunye nokunciphisa iswekile yegazi kwinkqubo ye-endocrine;
5. Ingathintela ukukhutshwa kwe-histamine, i-anaphylaxis medium, kwaye idlale indima echasene ne-anaphylaxis;
6. Inokuphucula ukunyamezelana komzimba kwi-hypoxia ebukhali;
7. Ukomeleza amajoni omzimba, ukuphucula ukukwazi ukumelana nezifo, unyango lwezifo, ukuthintela izifo, ukuguga, ukuthintela ukukhula kweeseli zethumba;